२० बर्ष पुरानो गाडी हटाउनुको भन्दा २० बर्ष पुरानो मानसिकता र सिस्टम हटाउन तिर लाग्नुहोस् - Enepalese.com
२० बर्ष पुरानो गाडी हटाउनुको भन्दा २० बर्ष पुरानो मानसिकता र सिस्टम हटाउन तिर लाग्नुहोस्
इनेप्लिज २०७४ चैत ४ गते १६:२० मा प्रकाशित
कुनै पनि कुरा लामो समय टिक्नका लागी त्यसको सहि वा उचित तरिकाले प्रयोग हुने बाताबरण हुनु पर्दछ । एदी मर्मत सम्भारमा ध्यान दिने हो भने सवारी साधनहरु पनि बिस बर्ष भन्दा धेरै टिक्न सक्छन ।
त्यशैले दोस् बिस बर्स पुराना गाडिको मात्र हो की २४० % भंसार लिएर सडकको खाल्टो समेत नटाल्ने सरकारको पनी हो ? नयाँ गाडी गुडाउदा चाँही काठमान्डौका सडकमा धुलो उड्दैन र मन्त्रि ज्यु ? हिउदमा धुलो र बर्खामा हिलो काठमान्डौका बाटोहरुका बिसेषता नै हुन् ।
खाल्टे,हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकले गाड़ी मात्र होईन मांछे पनी थोत्रा र रोगी भएका छन ।